Global Voices teny Malagasy » Alzeria: Lasa lamaody ve ny fihatsarambelatsihy? · Global Voices teny Malagasy » Print
Alzeria: Lasa lamaody ve ny fihatsarambelatsihy?
Voadika ny 15 Jolay 2010 8:06 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika Candy
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Alzeria, Hevitra
Mandinika ny fihatsarambelatsihy ilay mpitoraka blaogy Alzeriana Salim  (Ar) ary manontany hoe: Lasa lamaody ve ny fihatsarambelatsihy?
Ao amin'ny lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe Gossip, Thanks to Hypocrisy [Fosafosa, Misaotra noho ny Fihatsarambelatsihy], manontany i Salim:
Finaritra ve ireo izay mihomehy manoloana ahy ary avy eo manaratsy ahy any an-damosiko any? Ary ireo izay manozona ny governemanta an-tsokosoko sy mihomehy miaraka amin'ireo mpitandro filaminana eny an'arabe ary mihogahoga ny filoha rehefa manao fitsidihana izy, mahafinaritra azy ve izany? Ary ilay iray izay manoro hevitra ahy sy mieritreritra ny zava-mitranga amiko ary miasa saina momba ahy, manao izany any an-damosiko koa ve izy?
Ny valinteniny amin'ireo fanontaniana ireo dia:
Tsia, raha mbola manome lamosina azy aho dia hanompa ny reniko izy, tahaka ny hanompàny amin'ny reniny ny governemanta. Mety hankahala ahy izy, na dia tsy nanao na inona na inona ho amin'izany aza aho. Lasa lamaody toy ny zava-dratsy rehetra ny fihatsarambelatsihy. Ireo olon-dratsy izao no olona mendrika indrindra, ary raha mpiatsaravelatsihy no tokony hiantsoana azy ireo dia faritana kosa ho ny marani-tsaina. Ireo izay miara-mihomehy amin'ny olon-drehetra, lasa tian'ny olona. Nefa diso ny olon-dratsy ary farany dia hiaisotra ny saron-tavan-dry zareo. Ka ho fanombohana, nahoana moa izy ireo no manaraka izany lamaody izany?
Manohy ihany ilay mpitoraka blaogy:
Hiverina hametra-panontaniana aho, nefa amin'ity indray mitoraka ity dia hisy valiny ny fanontaniako.
Resaka matotra ry Salim, tena faly tokoa ve ianao omaly raha niara-nandihy tamin'ireo namanao enina izay vao nahazo ny diplaoma Bakalorea-ny? Nitondra fiara tsy am-pitandremana ianao ary nandefa ny mozika faran'izay mafy, dia nitehaka dia nihorakoraka… Nefa ny marina dia tsy faly mihitsy ianao! Nikorontan-tsaina mangiana ianao. Tany anatinao tany, nangina ianao ary niakatr'afo noho ny zava-drehetra… nanodidina ny tenanao dia fikorontanana tanteraka, nanomboka tany amin'ny tananao hatramin'ireo tadim-peonao mihetsiketsika. Fanaintainana toy inona no efa nodiavinao ka nahatonga anao hihorakoraka be toy izao? Namoaka ny tao am-ponao ve ianao sa nihatsaravelatsihy?
Mamarana i Salim:
Raha fihatsarambelatsihy iny, dia azo antoka fa ireo izay nanatsatoka antsy tao an-damosinao sy ireo mihatsara velatsihy manoloana ny governemanta dia tsy faly koa satria ianao, Salim, nalahelo fa nihatsaravelatsihy tamin'ny tenanao sy ireo rehetra nahatsikaritra ny hakivianao.
Lasa lamaody koa ve ny fihatsarambelatsihy any amin'ny fiarahamonina misy anao? Mandraisa anjara amin'ny adihevitra amin'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/07/15/7257/